Ny tsy fihainona miteraka loza – Tsodrano
Ny tsy fihainona miteraka loza
Ity no tantara mampalahelo entina hieritreretana amin’izao Karemy faha-4.
« Nisy mpivady niteraka fito. Efa manana zafikely maro. Miandry ny zafiafy. Efa lehibe tokoa izy mivady raha izany no jerena. Ary nahay niara-monina tamin’ny manodidina.
Indray andro tsy nampoizina dia nampivory ny fianakaviana izy mivady fa tsy mifanaraka ary hisaraka. Nohazavain-drizareo ny antony. Samy nanampy azy ireo ny olona mba tsy hanatanteraha izany. Tahaka izany koa ireo zanaka. Efa ho misy amam-bola ihany izany fifampiraharahan’ny rehetra izany no atao.Ilay Ramatoa moa dia tsy hisy iresahana mihitsy fa nijanona amin’ny fanapahan-keviny fa andao ny tokan-tranony.
Kanjo, narary ilay Rangahy, nandeha tany amin’ny mpitsabo. Rehefa vita ny « analyse » rehetra sy ny « radio » dia nambaran’ny dokotera fa tena voa mafy izy ary sarotra ny fitsaboana. Indrindra moa efa lehibe izy. Nazavain’ny dokotera fa haharitra ny fitsaboana. Misy ny fanafody am-bava fa tsy ampy. Fa hisy koa ny « chimiothérapie ».
Nandritra ny fotoana hitsaboana ilay Rangahy dia nanapakevitra ilay Ramatoa fa hijanona hikarakara azy. Noho izany dia faly Rangahy sy ny fianakaviana. Nandeha ny fotoana sy ny andro.Tena nikarakara tokoa ilay Ramatoa.Ilay Rangahy aza gaga.Satria tsy noheveriny fa misy fandavan-tena toa izao. Izany rehetra izany dia noheveriny fa be fitiavana ilay Ramatoa ary tena mbola tia azy. Naharitra roa taona ilay fitsaboana. Ary dia nilaza ny dokotera fa sitrana ilay Rangaha.Fa isan-taona kosa dia mila atao « contrôle ». Mila koa fakan-drivotra kely raha azo atao hoy ilay mpitsabo. Hafaliana moa izany na ny an’ilay Rangaha na ny an’ilay Ramatoa.
Niresaka tamin’ilay Ramatoa i Rangahy ka nanao sosokevitra fa tsara raha mampilaza izao vaovao lehibe amin’ny ankizy sy ny havana ary ny namana.Ary asiana korana tsotsotra. Teo anefa dia nahavariana ny fihetsiky Ramatoa. Tsy mandà ny korana sy ny ankizy ary ny havana aho satria tsy azontsika hialana ireo. Fa ny namana dia tsy ekeko. Nahoana kosa hoy ilay Rangaha. Satria sao mamitaka azy ireo isika hoy ilay Ramatoa. Dia nandeha teo ny resaka nanahirana. Naharitra ora maro sady feno alahelo.
Tsy ho tantaraiko anao mpamaky eto ny fifanakalozan-kevitry rizareo. Fa niafara tamin’izao. Hoy ilay Ramatoa : « Tsy hoe nikarakara anao aho dia heverinao fa tia anao.Tsy nisy intsony izany tato anatiko. Hafa ny atao hoe fitiavana, ary hafa ny fandavan-tena hanao soa. Izay azo atao amin’ny olona mila izany. Tsara raha nanampy anao ny nataoko mba hiverenan’ny fahasalamanao. Fa izaho tsy hijanona fa andeha satria efa salama izao ianao». Taitra mafy Rangahy ary saika nianjera izy satria tafatsangana tampoka no tafapetraka indray. Maizina taminy ny tany aman-danitra. Fa nahoana hoy izy. Efa tara izy ity hoy Ramatoa fa efa ela aho no nanaitra anao mba handinika ny tsy mety amin’ny fifandraisantsika fa tsy nety ianao. Tsy misy olona afaka miara-miaina raha mihamaty tsikelikely ny fifandraisany.
Tsy nisy ny korana, tsy nisy ny filazana ny vaovao afa-tsy tamin’ireo taranany ihany. Niova ny fiainan’ilay Rangahy satria izy irery sisa no tao an-trano. Lasa eritreritra mafy izy. Ramatoa lasa tany amin’ny tanana hafa nipetraka irery koa.
Afaka volana vitsivitsy dia namory ireo zanany ilay Rangahy nilaza fa toa variana tamin’ny zavatra maro izy. Nananatra sy nanafatrafatra ny zanany izy mba hifampihaino fa tsy manana ny marina hatrany akory ny tena. Afaka dimy volana dia nandao ity tany ilay Rangahy.
Tantara mampalahelo satria zavatra maro no nitranga ary tsy voatanisa eto.Fa natao hieritrertana koa amin’izao fotoanan’ny Karemy izao. Dieny mbola nomena fotoana hanovana izay tsy mety dia ataovy fa sao hanenenana. Ny lasa tsy miverina intsony.
Na dia tao aza ny naha-kristiana azy mivady, na dia tao aza ny zanany marobe dia niafara tamin’ny fisarahana ihany ny fiainany.
Ahoana hoy ny Soratra Masina ny amin’ny fanambadiana ? Ahoana hoy ny litorjia eo amin’ny fifanekena ? Tsy misy olona afaka miteny fa fantany tsara i Ranona. Fa tsara koa ny maka fotoana handinihan-tena tsindraindray .Tsy eo amin’ny tokan-trano ihany fa amin’ny lafiny maro rehetra.
Alohan’ny hitsarana azy mivady dia samia mandinika ny tena tsirairay. Tsy misy antony tokony hitsarantsika azy. Fa rizareo ihany no mahalala ny fifampitondrany sy ny fitiavana nananany.
Tsy hametraka teny ao amin’ny Soratra Masina aho androany fa mbola hiverina ary miverina tsy mitsahatra ny fahasarotan’ny atao hoe « FITIAVANA ».
Famonjena toa inona ?
Ny fandikana lalàna miteraka ny loza
Ny fanendrinkendrehana miteraka loza
fanambadiana, fifanekena, fisarahana, fitiavana, karemy, korana, litorjia, loza, mampalahelo, vaovao, zafiafy, zafikely
Recueillement – Hiram-bavaka
Clin d'oeil (9)
Soratra Masina (50)
Tsara ho Fantatra (40)
Retrouvez tous nos articles depuis l’année 2002. Sélectionner un mois juin 2019 (1) mai 2019 (1) avril 2019 (6) mars 2019 (1) février 2019 (1) décembre 2018 (5) novembre 2018 (1) août 2018 (2) juillet 2018 (2) mai 2018 (2) avril 2018 (1) mars 2018 (8) février 2018 (2) janvier 2018 (4) décembre 2017 (6) novembre 2017 (1) octobre 2017 (1) septembre 2017 (1) août 2017 (3) juillet 2017 (2) juin 2017 (7) mai 2017 (2) avril 2017 (4) mars 2017 (2) février 2017 (1) janvier 2017 (1) décembre 2016 (2) octobre 2016 (1) juillet 2016 (1) juin 2016 (1) mai 2016 (2) mars 2016 (2) février 2016 (6) janvier 2016 (2) décembre 2015 (5) novembre 2015 (1) octobre 2015 (2) septembre 2015 (2) juillet 2015 (1) avril 2015 (3) février 2015 (3) janvier 2015 (4) décembre 2014 (3) novembre 2014 (4) octobre 2014 (1) août 2014 (1) mai 2014 (1) avril 2014 (6) mars 2014 (3) décembre 2013 (1) novembre 2013 (1) octobre 2013 (2) août 2013 (6) juillet 2013 (3) juin 2013 (3) mai 2013 (2) avril 2013 (1) mars 2013 (6) février 2013 (4) janvier 2013 (2) août 2012 (5) juillet 2012 (5) juin 2012 (3) mai 2012 (3) avril 2012 (7) mars 2012 (3) février 2012 (2) janvier 2012 (3) décembre 2011 (3) novembre 2011 (2) octobre 2011 (5) septembre 2011 (4) août 2011 (1) juillet 2011 (6) juin 2011 (5) mai 2011 (4) avril 2011 (7) mars 2011 (1) février 2011 (1) janvier 2011 (3) décembre 2010 (2) novembre 2010 (1) octobre 2010 (1) septembre 2010 (3) août 2010 (1) juillet 2010 (6) juin 2010 (1) mai 2010 (3) avril 2010 (1) mars 2010 (5) février 2010 (4) janvier 2010 (6) décembre 2009 (2) novembre 2009 (3) octobre 2009 (3) septembre 2009 (1) août 2009 (1) juillet 2009 (1) juin 2009 (2) mai 2009 (5) avril 2009 (10) mars 2009 (4) février 2009 (5) janvier 2009 (7) décembre 2008 (5) novembre 2008 (6) octobre 2008 (3) septembre 2008 (4) août 2008 (4) juin 2008 (1) avril 2008 (1) mars 2008 (1) février 2008 (1) janvier 2008 (2) décembre 2007 (1) novembre 2007 (1) août 2007 (3) juin 2007 (4) mai 2007 (1) avril 2007 (1) mars 2007 (4) février 2007 (4) janvier 2007 (7) décembre 2006 (9) novembre 2006 (4) octobre 2006 (7) septembre 2006 (4) août 2006 (2) juillet 2006 (4) juin 2006 (3) mai 2006 (5) avril 2006 (7) mars 2006 (11) février 2006 (8) janvier 2006 (9) décembre 2005 (10) janvier 2005 (1) septembre 2004 (2) août 2004 (3) juillet 2004 (5) juin 2004 (4) mai 2004 (2) avril 2004 (6) mars 2004 (2) février 2004 (3) janvier 2004 (5) décembre 2003 (4) novembre 2003 (6) octobre 2003 (1) mai 2003 (4) avril 2003 (17) mars 2003 (1) février 2003 (4) décembre 2002 (3) novembre 2002 (1) octobre 2002 (6) septembre 2002 (4)
Fisaorana, Pentekosta 09/06/2019
Ny reny 21/05/2019
Pâques 2019 20/04/2019
Recueillement – Hiram-bavaka 18/04/2019
125 189 visites
ady Baiboly fahafatesana fahavalo fahoriana Famelan-keloka famonjena fampijaliana fanahy fanantenana fanasana fanjakana faty fiadanana fiainana fiangonana fifaliana finoana firenena fitiavana harena kolikoly kristiana lehilahy loza Madagasikara malagasy marina maty miaramila mpaminany mpampianatra mpanjaka mpitandrina rano rariny ratsy saina tahotra tantara tany tsara vahoaka vehivavy velona
© 2019 Tsodrano. Theme by Anders Norén.
Abonnez-vous aux publications de tsodrano.com